Outlook Express Weghachi Ngwá Ọrụ. Outlook Express Ihichapụ Email Iweghachite.
DataNumen Outlook Express Undelete bụ kasị mma ngwá ọrụ iji naghachi ehichapụ ozi ịntanetị na Outlook Express. Ọ na-eji teknụzụ dị elu iji nyochaa faịlụ DBX ma wepu ọtụtụ ozi ịntanetị gị dị ka o kwere mee.
Biko jiri DataNumen Outlook Express Repair iji weghachite ozi-e site na CORRUPT Outlook Express mail na nchekwa.
Biko jiri DataNumen Outlook Repair iji weghachite ozi ịntanetị na ihe ndị ọzọ site na faịlụ CORRUPT Outlook PST.
4.90 / 5 (site na 1,510 votes)
Gịnị mere DataNumen Outlook Express Undelete?
Naanị ihe edetu iji mee ka ị mara na mmemme ahụ dị n'elu na-arụ ọrụ nke ọma ma m nwetaghachiri almost Email 3000 nke m nwere na mberede
Agbalịrị m ngwaahịa atọ ọzọ tupu achọta m Ọganihu Outlook Express Iweghachite. Abụọ n'ime mmemme chọtara ozi niile, agbanyeghị, ozi ndị ahụ nwere
Kọmputa M Guy
Enwere m nsogbu na faịlụ outlool 1.5GB, enwere m nsogbu ma AODR edozi nsogbu m ma nyere m aka naghachi data m niile, Daalụ nke ukwuu
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Nkwado iji weghachite ozi ịntanetị ehichapụ na Microsoft Outlook Express 5/6 nchekwa nchekwa.
Nkwado iji weghachite dbx faịlụ echekwara na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado iji weghachite ọtụtụ faịlụ dbx.
Nkwado iji weghachite ozi ịntanetị na dbx faịlụ dị ka 4GB.
Nkwado iji weghachite mgbakwunye email.
Nkwado ịchọta ma họrọ faịlụ dbx ka agbakee na kọmpụta mpaghara.
Ejikọtara na Windows shei, n'ihi ya ị nwere ike iweghachite ozi ịntanetị na folda ozi na mpaghara (aka nri) menu nke Windows Explorer n'ụzọ dị mfe.
Olee otú iji naghachi
Outlook Express echekwa ozi ịntanetị niile nke folda ozi na faịlụ .dbx kwekọrọ. Dịka ọmụmaatụ, faịlụ Inbox.dbx nwere ozi ịntanetị ndị egosiri na folda ozi igbe dị na Outlook Express, faịlụ Outbox.dbx nwere ozi ịntanetị nke egosiri na folda ozi Outbox, wdg.
Ọ bụrụ na ihichapụ ọtụtụ ozi ịntanetị na folda ozi na mberede, mgbe ahụ ị nwere ike iji DataNumen Outlook Express Undelete ka i scanomi dbx faịlụ kwekọrọ na mail nchekwa, naghachi-ehichapụ ozi ịntanetị na-azọpụta ha dị ka .eml faịlụ nke nwere ike mfe ibubata azụ Outlook Express.
Chọta faịlụ dbx kwekọrọ na folda ozi ma ọ bụrụ na i mebeghị otú ahụ.
Mara: Tupu ị nwetaghachi ozi ịntanetị ehichapụ na faịlụ dbx na DataNumen Outlook Express Undelete, biko mechie Outlook Express na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ dbx ahụ.
Họrọ dbx faịlụ ebe ehichapụ ozi ịntanetị ga-enwetaghachi:
Nwere ike itinye dbx filename ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
Site na ndabara, DataNumen Outlook Express Undelete ga-weputa niile natara ozi ịntanetị na ndekọ na xxxx_recovered, ebe xxxx bụ aha rụrụ arụ dbx faịlụ. Ọmụmaatụ, maka faịlụ Inbox.dbx, ndabara mmepụta ndekọ ga-Inbox_recovered. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ndekọ ọzọ, biko họrọzie ya otu a:
pịa bọtịnụ, DataNumen Outlook Express Undelete ga start na-agbake ozi nhichapụ site na faịlụ dbx ahọpụtara.
Mgbe mgbake usoro, ọ bụrụ na ehichapụ ozi ịntanetị na dbx faịlụ ọma, ị ga-ahụ a igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe natara ozi Outlook Express site na ịpị abụọ na ịpị akara ngosi nke faịlụ .eml na ndekọ mmepụta. Ma ọ bụ bubata ọtụtụ ozi na folda ozi na Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete A tọhapụrụ 2.2 na November 23, 2013
DataNumen Outlook Express Undelete 2.1 wepụtara na July 17, 2009
Mee ka arụmọrụ nke mgbake dịkwuo elu.
DataNumen Outlook Express Undelete A tọhapụrụ 2.0 na March 5, 2009